नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग गौरव गर्न लायक प्रगति, नेपालमा कहाँ-कहाँ बन्दैछन् सुरुङमार्ग ? – Khabar Patrika Np
नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग गौरव गर्न लायक प्रगति, नेपालमा कहाँ-कहाँ बन्दैछन् सुरुङमार्ग ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: १९:५६:४७
ठमाडौं । मुलुकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम बढेसँगै दुई वटा लकडाउन भई कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि थला परिरहेका बेला नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण प्रगति भने गौरव गर्न लायक पाइएको छ ।
यो आयोजना सफलतासँगै नेपालकोे यातायात क्षेत्रको पहिलो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङबाट बाहिरिने सवारी साधनको प्रयोगका लागि काठमाडौँको बलम्बु–थानकोट क्षेत्रमा निर्माण हुने फ्लाइओभर १३० मिटर लामो हुनेछ । सुरुङभित्र आगलागी वा अरु दुर्घटनामा उद्धार गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि मूल सुरुङसँगै अर्को सुरुङ रहनेछ । त्यो पनि साना सवारी साधन नै चल्ने क्षमताको रहनेछ ।
गौशाला–चावहिल अण्डरपासको पनि सोच अघि बढेको छ । भौगर्भिक अवस्थाका कारण पहिराबाट आक्रान्त रसुवागढी–बेत्रावती क्षेत्रमा स–साना सुरुङ निर्माण गर्न चीनले अध्ययन गरिरहेको छ । बबई–छिन्चु सुरुङ अर्को आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ ।
कसलाई प्राथमिकता दिने, यातायातको चाप कुनमा छ, छिटो बनाउँदा केबाट फाइदा हुन्छ आदि विषयको अध्ययनपछि ढाँचा र रकम सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजनालाई अघि बढाइने सडक विभागको भनाइ छ ।
मध्यपहाडी, मदन भण्डारी र सिद्धार्थ राजमार्गको यात्रालाई छिटो छरितो र सुरक्षित तुल्याउन स–साना सुरुङ बनाउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारले अघि सारेको छ । नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरिरहँदा अध्ययन, विश्लेषण र अभ्यासका काम एकैसाथ अघि बढेको छ । रासस